Izizathu ezi-5 Zokwenza Izizathu Zokuqasha I-Ejensi Yezentengiso Yedijithali | Martech Zone
NgoLwesihlanu, ngoDisemba 5, i-2014 Douglas Karr
Kuleli sonto bengifunda okuvela enkampanini yezentengiso yedijithali yokuthi kungani kufanele ubaqashe. Isizathu sokuqala nesivelele kwaba ubuchwepheshe bokumaketha kwidijithali. Anginaso isiqiniseko sokuthi ngiyavumelana nalokho - iningi lezinkampani esisebenza nazo ezinomnyango wezokumaketha endaweni zinobuchwepheshe obumangalisayo futhi sivame ukufunda kuzo njengoba zifunda kithina.
Izizathu ezi-5 zokuthethelela ukuqasha inkampani yezentengiso yedijithali
Bureaucracy - i-ejensi yedijithali akumele ikhathazeke ngezombangazwe zangaphakathi, izingqinamba zesabelomali, ukuqasha / ukudubula, nezinye izindawo okugxilwa kuzo umthengisi oqashwe ebhizinisini okudingeka azikhathalele. I-ejensi yedijithali iqashwa ngezinhloso ezithile futhi badinga ukuhlangabezana nalezo zinhloso, ngaphandle kwalokho ubudlelwano buphelile. Ngenkathi i-ejensi ingabiza ngaphezulu ngehora kunabasebenzi, isikhathi esichithwe kugxilwe emsebenzini osetshenziswayo senza umehluko.
Ukufinyelela - kusukela Highbridge isebenza namakhasimende angaphezu kweshumi nambili, siyakwazi ukulayisense lesoftware futhi sisabalalise izindleko kumakhasimende ethu. Isicelo esisodwa esilula sokubika esinaso sokuthi wonke amaklayenti ethu athanda izindleko eziyizinkulungwane eziningana zamarandi esihlalweni ngasinye… kepha sithenga izihlalo ezingama-20 futhi sinikeza ukubikwa njengengxenye yephakethe lethu lokubonisana.
Imiphumela - Ukuzibandakanya kwethu kuza nesaziso sezinsuku ezingama-30 kungabuzwa mibuzo. Amaklayenti ethu angamisa noma aqede ubudlelwano nganoma yisiphi isikhathi uma engatholi imiphumela ayidingayo. Uma uqasha iqembu, umqashi unesibopho sokuqasha, ukuqeqesha, ukuqapha kanye nokuxoshwa kwesisebenzi. Ngenkampani yokukhangisa yedijithali, lokho kungumsebenzi wabo - hhayi owakho. Uma bengenzi kahle, uthola enye inkampani ngaphandle kwazo zonke izinhlungu zekhanda.
Ukuphumelela - Ngoba sihlakulela amasu kuwo wonke amaklayenti ngezigaba ezahlukahlukene ekucabangeni kwawo, siyakwazi ukuhlola ngeklayenti elilodwa futhi sikhiphe amasu kuwo wonke amaklayenti ethu. Lokho kunciphisa ubungozi futhi kuqinisekise imiphumela ethuthukisiwe, kufinyelelwe imigqa yesikhathi, futhi kunciphise izindleko jikelele ngenkathi kukhuphuka imiphumela.
Izikhala - Kwesinye isikhathi sisebenza nezinkampani ezivelele kusu elilodwa noma amabili, ngakho-ke imizamo yazo iqhubekela phambili iye kolunye uhlangothi. Uma ungumuntu omkhulu we-imeyili, i-imeyili iba isu lakho eliphakeme lokukhiqiza imiphumela. Awunaso isikhathi sokufunda nokuzama amanye amasu ngakho-ke ubeka ukugxila kwakho lapho wazi khona ukuthi uzothola imiphumela. Ukuqasha i-ejensi kukunikeza ithuba lokugcina ukugxila kwakho, kepha khomba izikhala i-ejensi engazigcwalisa.
IHubris idlange ngaphakathi kwezinhlangano ezinkulu. Ngezinsizakusebenza zemali, kuhlala kukhona othile obuzayo Kungani singeke nje siqashe umuntu sizenzele thina? Njengoba isimo sedijithali silungisa njalo futhi ama-ejensi kufanele ahambisane nezinguquko, izinkampani zihlushwa izinkinga zezinsizakusebenza, amathuluzi anganele, izinqubo ezingaphelele nezinye izinkinga zangaphakathi ezibavimbela ekusebenziseni kahle amasu abafisa ukuwahlola noma bawenze aphelele.
Abasubathi abakhulu kunabo bonke bafana kakhulu - baqasha izazi zokudla, odokotela, ochwepheshe bezobuchwepheshe, abaqeqeshi, nezinye izinsiza ukubasiza ukuthi bazuze ubukhulu. Ukuqasha i-ejensi yedijithali kungakusiza ngokuphelele ukuthi ukhuphuke ngokushesha, wenze ngokushesha, futhi kukhiqize imiphumela emangalisayo engafaniswa ngaphakathi. Ukuqasha i-ejensi kufanele kusize inkampani yakho ifinyelele ubukhulu bokumaketha kwedijithali.
Tags: agencyejensi yedijithaliejensi yokuthengisa yedijithaliizizathu zokuthi kunganikungani
Mar 20, 2015 ku-6: 21 PM
Ngingakhangisa 'ukuzwa ukuzwa' nezithupha kuhlu olungenhla.
KwaPeople Productions, sibonile namakhasimende ethu amaningi ezinkampani ukuthi eza kanjani kithi hhayi ngenxa yezizathu ezibalwe ngenhla kuphela, kodwa nangenxa yokuthi ubudlelwano esibusungulayo nomunye nomunye. Lapho iklayenti lishiya inkampani, akudingeki babuyise ubudlelwano - bavame ukusiphatha basiyise enkampanini yabo elandelayo. Lokhu kubavumela ukuthi banqamule isakhiwo sokwethenjwa futhi imvamisa singaqala ukwenza isipele futhi.
Lesi sisekelo sisivumela ukuthi singene kumasu namasu amasha nenkampani entsha, ngenkathi sisebenzisa ubudlelwano obusebenzayo ukunqamula amajika wokufunda akabili weklayenti elisha KANYE noxhumana naye omusha. Lokhu futhi kuvumela iklayenti ukuthi libukeke njengenkanyezi ye-rock, lifinyelele imiphumela emihle ngokushesha.